Otu esi ehichapụ akaụntụ Instagram gị kpamkpam Gam akporosis
Otu esi ehichapụ akaụntụ Instagram gị kpamkpam
Instagram bụ otu n'ime ngwa ndị kachasị ewu ewu maka ekwentị gam akporo site na n'ezie. Ọ bụ ngwa anyị nwere ike ịnweta ọtụtụ ụdị aghụghọ niile. Ọ bụ ezie na enwerekwa ndị kpebiri ịhapụ netwọkụ mmekọrịta. Ihe kpatara nke a nwere ike ịbụ ihe dịgasị iche iche. Ma, e nwere oge na-abịa mgbe ị chọrọ ihichapụ akaụntụ gị kpamkpam.
Nke a bụ nzọụkwụ dị mkpa, n'ihi na ọ pụtara ịhapụ ihe niile metụtara akaụntụ Instagram kwuru. Ma, ọ bụrụ na i meela mkpebi ahụ, anyị ga-egosi gị usoro ị ga - agbaso n'okpuru nwee ike ihichapụ akaụntụ a na netwọkụ mmekọrịta foto.
N'okwu a, anaghị eme usoro ndị a ka anyị soro na ngwa ahụ. Ma anyị ga-eji nsụgharị weebụ, nke anyị nwekwara ike iji na ekwentị gam akporo anyị. Iji mee nke a, ihe mbụ anyị ga - eme bụ tinye njikọ a. N'ebe a, anyị ga-abanye na akaụntụ Instagram anyị.
Ihe mbụ ha mere bụ jụọ gị ihe kpatara ị jiri hichapụ akaụntụ a na netwọk mmekọrịta. Nwere ike ịhọrọ nhọrọ kachasị masị gị na ndepụta egosiri na ihuenyo. Ozugbo emere nke a, netwọkụ mmekọrịta na-anwa ịnye gị nhọrọ iji gbochie gị imechi akaụntụ a, mana nke a abụghị ihe ị nwere mmasị na ya. Ya mere, anyị ga-pịa ọzọ.
Mgbe ahụ, a ga-agwa anyị ka anyị degharịa paswọọdụ maka akaụntụ ahụ. Mgbe anyị mechara nke a, ọ ga-eziga anyị na ihuenyo ọzọ, ebe anyị nwere ike ihichapụ akaụntụ Instagram anyị. Ya mere, anyị ga-pịa bọtịnụ ahụ kwuru Hichapụ akaụntụ kpamkpam.
Na usoro ndị a anyị ehichapụla akaụntụ Instagram anyị kpamkpam. A ga-ehichapụ ihe niile dị na akaụntụ ahụ, dị ka foto, ozi, wdg. Yabụ, ọ dị mma ka ibudata ihe niile masịrị gị tupu ihichapụ akaụntụ gị ruo mgbe ebighị ebi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Otu esi ehichapụ akaụntụ Instagram gị kpamkpam
Nkọwa izizi nke LG G8 ThinQ, ekwentị 5G izizi nke akara ahụ?
Ekpughere n'ihu Nokia 9 Pureview, ekwentị mbụ nwere ese foto azụ ise